Izixhobo zamandla-Kangton Industry Co., Ltd.
Umxhubi Wesandla Sombane
Ukujikeleza ihammer Drill
Ingcinezelo High yomsuki weengubo
Izixhobo zoKhathalelo lweMoto
Ukusuka kuluhlu olomeleleyo kunye ne-grind grinders ezinamandla ezivela eKangton, abaqalayo, abanomdla kwi-DIY kunye neengcali ngokufanayo bonke baya kufumana into abayifunayo. Izixhobo zethu zenza umsebenzi olula wokwahlula isinyithi, ilitye kunye neceramic, ukugaya, ukugudisa kunye nokujikisa, kunye nokurhabaxa kunye nokuphazamisa.
Ukusuka kwimithi esebenza nge-DIY, ukulungisa, ukwenza ngokuchwela kunye nokwenza izinto, ingqokelela ye-Kangton yesanti yomphezulu womhlaba inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa kunye nokusetyenziswa. Fumana ukugqiba okuhle kwiiprojekthi zakho ze-DIY kunye nokuchaneka okucacileyo kwii-niches nakwiikona ezijikelezileyo. Kwaye ukugcina indawo yakho yokusebenza icocekile akukaze kube lula ngeenkqubo zokuqokelela uthuli kunye neinjini ezinomyalezo ophantsi!
Ukuba ufuna ukunika imoto yakho ukukhanya okutsha, umatshini wokucoca unika inkonzo elungileyo. Ukuba ujonga isixhobo esineenjongo ezininzi, i-angle polisher lolona khetho lufanelekileyo kuwe, kuba inokusetyenziselwa unyango lweminye imiphezulu yepeyinti kunye nemigangatho. Kuxhomekeke kwisincamathiselo kunye nokucwangciswa kwesantya, esi sixhobo sifumana lula ukugaya / ukwenza isanti ngomsebenzi owenziwe ngomthi, ngentsimbi nangeplastiki.
Ukuba unendawo enkulu yangaphakathi yokugqiba okanye yokulungisa umsebenzi owenzayo, ngekhe ukwazi ukunqanda ukuthenga isarha. Iingcali kunye neengcibi ezinamabhongo ngokufanayo ziya kufumana into eziyifunayo kwiijigsaws, iisarha ezibambe ngesandla kunye neesarha ezivela eKangton. Ijigsaw isebenza ngomthi, iplasta kunye nelitye kunye nesinyithi ngokuchaneka kusetyenziswa isarha efanelekileyo yomsebenzi lowo. Isetyhula isarha ingumncedisi oqeqeshiweyo wokusika ngokuthe ngqo kunye nokusika i-miter kwisinyithi, ngomthi, ngeplastiki, ngeplastibhodi, ngamatye kunye neethayile. Isarha yendalo iphela yenzelwe ukuba ibe nokuguquguquka okuphezulu kwaye yenza imisebenzi ebanzi yokubona ngemfashoni ebonakalayo kwaye ingena ngokwayo xa kufuneka inkqubela phambili ekhawulezayo yokusaha.
Izikulufa zokuhambisa ezingenantambo zezona zijikelezayo phakathi kwezixhobo kwaye akukho khaya lifanele ukuba ngaphandle kwazo. Ukuba ufuna ukuzigcinela inkathazo yokuqinisa izikere ngesandla, i-screwdriver engenantambo yeyakho. Kwelinye icala, i-drill / screwdriver engenantambo, kwelinye icala, kunye okanye ngaphandle kwesenzo sesando, idibanisa izibonelelo zescrewdriver engenantambo kunye nezo zokuprinta. I-Kangton ibonelela ngezixhobo zobuchwephesha ngamandla amaninzi ekusebenziseni okunzulu kunye nezixhobo ezincinci zokuphatha okuphuculweyo.
Ngomatshini osikiweyo we-12 "no-14", i-Kangton ineesarha ezisikiweyo ozifunayo kuwo nawuphi na umsebenzi, ezinje ngombhobho, intonga, i-engile, intsimbi yejelo, izinto zewindow kunye nentsimbi yokuqina, njl. inamandla kwaye isikwa ngokuchanekileyo.
Isando esijikelezayo seKangton kunye nesando sokudiliza sihlangabezana nazo zonke iimfuno ngenxa yobomi bayo obude kakhulu, umgangatho weprimiyamu kunye namandla anomdla. Isando seKangton silungele nayiphi na imeko kunye nayo nayiphi na into eyomeleleyo.
Yenzelwe ngokukodwa ukususa ukugqitywa kodonga oludala kunye neesanti zeplastibhodi yokudibanisa ukufezekisa ukugqibezela okulungeleyo ukutyabeka okanye ukupeyinta okutsha. Iyunithi ikwabandakanya inkqubo yokucoca ekhuselekileyo yokususa ngokukhuselekileyo uthuli oluveliswa sisanti-ukukunceda ukuba ugcine imeko yokusebenza icocekile, isempilweni, ingenathuli.
I-auger esetyenziselwa ukumba imingxunya yeposi, inokuba sisixhobo esenziwe ngesandla, esenziwe ngesandla, okanye esinikwe amandla yimoto yombane okanye ipetroli injini, sisixhobo esifanelekileyo sokwenza imingxunya yokutyala igadi, abalobi bomkhenkce ukubhola imingxunya ukuloba kuyo. Kwaye ukubhola kwimithi yemaple ukukhupha isiraphu yemephu kuyenziwa kunye nokusetyenziswa kwezixhobo.
Umxhubi akadli kuphela ixesha kodwa uyadinisa kwaye uyadinisa ngaxeshanye. Ukuphulukana nomonde okanye amandla apha kukhokelela kwiziphumo ezihlwempuzekileyo. Uncedo lukufuphi ngohlobo lodlame lombane. Ngokukodwa xa kuziwa kwisidingo sokuxuba imiqulu emikhulu, ipeyinti kunye nomdli womdaka luluncedo olukhulu. Ifakelwe isincamathisi esifana ne-whisk, umxube uxutywe ecaleni kwexesha.
Izicwangciso ezivela eKangton zilungele imisebenzi eyahlukeneyo yokucwangcisa ekhaya, egadini kunye nakwiworkshop. Benza umphezulu womhlaba wokulungisa, ukusonga kunye nokujikeleza kube lula. Iiplani zethu zombane zisebenza nge-blade roller apho imiphetho yokusika ijikelezayo kwaye isuse iichips kwizinto eziphathekayo. Ziyakhawuleza, zichanekile kwaye zinamandla ngakumbi kunomcwangcisi ophethwe ngesandla. Ukuba nje ubuyazi ukuba ngaphambili ...
Iisanti zesangton ziyinyani kubo bonke abajikelezileyo. Ukusuka kuyilo lwangaphakathi ukuya kulungiso kunye nophuhliso ngokutsha ukuya kuchwela kunye nomsebenzi wobugcisa, imimandla yesicelo yahlukile njengoluhlu lwezixhobo ezinokuqwalaselwa. I-Kangton ibonelela ngoluhlu olubanzi lweesanti zebhanti, iisanders ezijikelezayo, i-delta sanders kunye ne-orbital sanders. Ke uya kusifumana ngokuchanekileyo isixhobo osifunayo kwiprojekthi yokuphucula ikhaya. Abo bafuna isixhobo esiguquguqukayo kangangoko banakho ukusebenzisa izinto ezininzi ezisebenzayo.
Ukuba ukhe wafudukela ekhaya, uya kwazi konke malunga neenzuzo ezibalulekileyo zokuqhuba. Impembelelo yethu yokuziqhelisa ukujongana ngempumelelo nezinto ezilukhuni ezifana nokwakhiwa kwamatye, ilitye okanye iithayile enkosi kwindlela yazo yempembelelo. Zombini izinto ezithandayo ze-DIY kunye nabasebenzisi abanamabhongo baya kufumana into abayifunayo kuluhlu lweemveliso zeKangton.
Izixhobo zempembelelo zombane, sele zithandwa kakhulu ngoku.zinejubane elifanayo kunye nomthamo wefreyithi yomoya, Zisetyenziswa kakhulu kumashishini amaninzi, njengokulungiswa kweemoto, ulondolozo lwezixhobo ezinzima, indibano yemveliso, iiprojekthi ezinkulu zokwakha, nayo nayiphi na into omnye umzekelo apho kufuneka imveliso ephezulu ye torque.
I-DIYers kunye nomhlobo osenyongweni womntu ophetheyo: isandla sombane sabona! Ukugqibelela kwabasaqalayo abanamabhongo kunye neengcali ngokufanayo - Iisarha zeeworkshop ezenziwe ngu-Einhell zilungele iinkuni, isinyithi, iplastiki, iplastibhodi kunye nelitye. Khetha kwijogsaw ngomsebenzi ochanekileyo, iisarha zetyhula zokucheba ngokuthe tye kunye nesigqubuthelo, kunye neesarha jikelele ukulungiselela ubhetyebhetye bokusetyenziswa.
Iipeyinti ezininzi kunye nohlengahlengiso lokuhamba komoya zikuvumela ukuba unxibe iingcango, iifestile, iindonga, iingcingo, ukuhombisa, iisilingi, imigangatho, iikhabhathi, ifanitshala yasekhaya, kunye nezinye izinto ngokulinganayo kunye nomgangatho ophezulu xa kuthelekiswa nezinto ezininzi, ezinamandla ezingenazitshizi zokupeyinta ezikhoyo.
Lwedilesi: Rm. 1302, Indlu enkulu, i-210 Siping Rd., Shanghai, 200086, China
Umnxeba:+86 21 55151611
Ifeksi:+86 21 55159770